अर्थमन्त्रीलाई ऐतिहासिक अवसर ‘घुस होलिडे’ घोषणा गर्नुस्, पैसा यसरी बर्सिन्छ
बाबुराम ढकाल आइतबार, जेठ ४, २०७७ मा प्रकाशित
आदरणीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यू,
‘विश्वका कुनै पनि अर्थमन्त्री अहिले राम्रोसंग निदाउन सकेका छैनन्’ करिब एक महिना अगाडि यस्तै आसयको तपाईको एउटा प्रतिकृया सार्वजनिक रुपमा पढ्न पाएको थिएं । त्यही भनाइले तपाई कति तनावमा हुनुहुन्छ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै धर्मराएको छ । अर्थतन्त्रलाई टिकाउन र सही दिशामा अगाडि बढाउने ‘केन्द्रिय पात्र’ अर्थमन्त्री नै हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि देशका अर्थमन्त्रीहरु तनावमा हुनु स्वभाविक हो । तनाव सहन नसकेर कतिपय अर्थमन्त्रीहरु त मानसिकरुपमै विक्षिप्त बन्न थालेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । त्यसमाथि तपाईलाई त कोरोनाको साथसाथै ‘पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन’ ले पनि अर्काे ठूलो तनाव सृजना गरेको छ । किनकी अहिले नेकपा भित्रको सबैभन्दा ठूलो विवादको एउटा ‘केन्द्र’ तपाई हुनुभएको छ । तपाईलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने मुद्धा अहिले सत्तारुढ पार्टीको प्रमुख विवाद हो ।
सबैलाई थाहा छ—देशको अर्थतन्त्र जर्जर छ । यसै पनि डामाडोल रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले ४ वर्षमा भोगेका ३ वटा ठूला भवितव्य भूकम्प, नाकावन्दी र कोरोना भाइरसको सामना गर्नु पर्यो । अलि अलि गति लिन्छ कि भन्ने आश जागेको बेला लगातारका भवितव्यले देशकै समग्र विकास प्रकृयालाई नै इतिहांसको कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।
यो अवस्थाबाट उम्किन अहिले सरकारदेखि विज्ञहरुले गंभिर चिन्तन गरिरहेका छन् भन्ने हरेक नेपालीलाई थाहा छ । तिनको ‘गंभिर चिन्तन’ले के परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा झन धेरै थाहा छ । किनकी तिनीहरुको ‘चिन्तन’ र व्यवहार विचको तालमेलको परिणामा योजनावद्ध आर्थिक विकासको झण्डै ७ दशक लामो विडम्बनापूर्ण इतिहांस साक्षी छ ।
बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा पक्कै पनि तपाईलाई पचासौं थरि सुझावहरु आएका छन् । यसै पनि नेपालीहरुले गर्न जानेकै तीनवटा काम छन्—आलोचना गर्ने, दवाव दिने र आश्वासन वा सुझाव दिने ।
यी तीन कामले आर्थिक उन्नती हुने भए नेपाल उहिल्यै विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र भैसक्थ्यो ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यू ! यो पत्र न तपाईको लागि सुझाव हो, न त आलोचना वा अरु केही ।
यो, केवल तपाईलाई वर्षाैंदेखि अति नजिकबाट चिन्ने र आदर गर्ने एकजना नेपाली मतदाताको प्रस्ताव हो—आउंदो आर्थिक वर्षका ३६५ दिनलाई नै ‘घुस होलिडे’ घोषणा गरौं ।
यत्ति गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन र स्रोतहरुको जोहो गर्न तपाईले विश्व वैंक, एशियाली वैंक र आईएमएफसंग रोइकराई गर्नु पर्दैन । लगानी सम्मेलनको नाटक गरेर ‘उधारो सहयोग’मा चित्त बुझाउनु पर्दैन ।
किनकी, नेपालमा वार्षिक बजेटको झण्डै झण्डै आधा रकम बराबरको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अझ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव युवराज पाण्डेको भनाइलाई मान्ने हो भने त नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत हिसाब गर्दा भ्रष्टाचारको राशी त्यही अनुसार बढ्छ र झण्डै झण्डै कूल बजेटको हाराहारीमै भ्रष्टाचार हुने गर्छ । (हेर्नुहोस पाण्डेले लेख्नु भएको सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक कार्यको व्यवस्थापन पुस्तकको पेज नं ४६५)
‘कूल बजेटको हाराहारीमै भ्रष्टाचार हुनु’ भनेको कति हो ? र त्यो रकम भ्रष्टाचार नभई सदुपयोग गरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई जति जानकारी कस्लाई होला ? मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने यदि तपाईले सांच्चैको आंट गरेर ‘घुस होलिडे’लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो भने ‘कोरोनाले गर्दा सकिएन, ऋणको व्याज तिर्नको लागि २ वर्षको समय थपिदेउ’ भन्दै अहिले जसरी तपाईले आइएमएफ र विश्व वैंकसंग हारगुहार गरिरहनु भएको छ, त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको लागि मोदीको पानी जहाज वा सी जिनफिङको रेलको आश गरिरहनु पर्नेछैन । ‘एमसीसी’ को ‘न्यानो’ पनि ताप्नु पर्ने छैन ।
आफ्नो गाउं आफै बनाउं कार्यक्रम मार्फत गाउंलाई ५ लाख रुपैंया दिंदा नेपालको समग्र विकास प्रकृयाले कति ठूलो छलाङ मारेको थियो भन्ने बारेमा चर्चा गरिरहनु पर्दैन । ५ लाख सोझै केन्द्रबाट गाउंमा पुग्दा करोडौंको काम भएको थियो । जनताले छुट्टै किसिमको सकारात्मक उर्जा प्राप्त गरेका थिए । त्यस्ले नेतृत्वप्रति कति आशावादीता थपेको थियो भन्ने कुरा तत्कालिन नेकपा एमालेको नेतृत्वले साढे २ दशकसम्म पनि त्यस्कै ‘व्याज’बाट राजनीति टिकाएको घटनाले नै स्पष्ट हुन्छ ।
समय क्रममा अहिले तपाईलाई भरतमोहन अधिकारीले जस्तै ऐतिहांसिक (अझ त्योभन्दा पनि बढी) अर्थमन्त्री बन्ने मौका दिलाएको छ । यो मौकालाई सदुपयोग गरेर अहिलेको जटिल अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प ‘घुस होलिडे’ नै हो । यो जति चुनौतिपूर्ण छ, त्यति नै सजिलो पनि छ । किनकी अरु पार्टीको कुरा छोडौं, आफ्नै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने देश र जनताको लागि १४, १४ वर्ष जेल बसेको र नेपाली जनतालाई विकासको सपना देखाउने प्रधानमन्त्री साथमा हुनुहुन्छ, वर्षाैं जनयुद्ध गरेका ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । देश र जनताको लागि त्यत्रो योगदान गरेका पार्टी अध्यक्षहरुले जावो एक वर्ष ‘ घुस खान्न, तिमीहरु पनि नखाउ’ भनेर आदेश दिन सक्दैनन् भनेर कसरी विश्वांस मान्नु ?
त्यसमाथि ‘इस्पाती स्वभाव’का कार्यकर्ताहरुले देश भरिभराउ छ । सरकारका, नीजि क्षेत्रका हरेक निकायहरुमा ‘कम्युनिष्ट कार्यकर्ता’को विगविगी छ । उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिंदा नै देश र जनताको लागि काम गर्ने कसम खाएका हुन्छन् । के उनीहरु एक वर्षसम्म घुस लेनदेनमा सहभागि नभई आफ्नै काम गरेर जीवन गुजार्न सक्दैनन् ? यदि एक वर्ष पनि घुस नदिई, नखाई बस्न सक्दैनन भने तिनीहरु ‘कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता’ बन्न योग्य हुन्छन् ?
यदि एक वर्षसम्म नेकपाका हरेक नेता र कार्यकर्ताले ‘देश र जनताको लागि प्रतिवद्ध भएर’ घुस खांदिन, खुवाउंदिन भन्ने हो भने ‘घुसको कारोवार गर्ने’ अरु कुन पार्टीका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी वा व्यापारी वांकी रहलान् ?
मलाई त लाग्छ, एक जना पनि वांकी रहंदैनन् । अर्थात् देश सांच्चै नै विकासको दिशामा फड्को मार्नेछ ।
त्यसैले एकजना कुलमान घिसिङले ‘घुस खांदिन र खान पनि दिन्न’ भन्दा देशले अन्धकारबाट मुक्ति पायो । विद्युत माफियाहरु १५,२० वर्ष लोडसेढिङ हट्दैन भनेर विद्युत उत्पादन र आपूर्तीको अवस्थाको बारेमा निकै ‘तथ्यपूर्ण’ हिसाव देखाइदिन्थे र हामी जस्ता सचेत नागरिकहरु पनि त्यसमै हो मा हो मिलाउंदै इन्भर्टरका ब्याट्री चार्ज गर्न पाउंदा नै मख्ख पर्दथ्यौं । तर, एउटा कुलमान आएर ‘घुस खांदिन र खान पनि दिन्न’ भनिदिंदा विद्युत क्षेत्रका तथाकथित विज्ञहरुको हिसाब किताब कसरी उल्टियो हेर्नुस त ।
तपाई त देशको अर्थमन्त्री ।
तपाईले घुस खानुहुन्छ भनेर मैले त के, तपाईलाई कसैले पनि कल्पनासमेत गर्न सक्दैन । तर, अब तपाईले ‘मैले खांदिन’ भनेर मात्र पुगेन, ‘खान दिन्न’ पनि भन्न सक्नु पर्छ । घुस दिने र खानेहरुलाई ठाउंका ठाउं कारवाही गर्ने गरि आर्थिक कानुनहरुको निर्माण र कडाई पुर्वक लागू गर्नुस् । त्यसको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको बजेटबाटै ‘घुस होलिडे’को घोषणा गर्नु हो । घुस खाने र खुवाउने कार्यमा संलग्न रहनेहरुको कम्तिमा एक वर्ष पासपोर्ट रद्ध गर्ने, ठेक्का पट्टाहरुमा संलग्न नदिने र कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नदिने घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरौं त, अर्थमन्त्रीज्यू तपाईले दिने हरेक रकमले परिणाम दिनेछ । पाई पाई रकमले देशको समृद्धिको खाका कोर्नेछ । त्यसको लागि न त कोरोनाले अवरोध गर्नेछ, न त रेमिट्यान्स घट्यो भनेर चिन्ता गर्नु पर्नेछ । न त, रोजगारी सृजना वा अरु केहीको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ । गाउं गाउंमा आफै काम हुन्छ । उद्यमशिलता र रोजगारी फटाफट सृजना हुनेछ । उत्पादन र बजारीकरणको लागि पनि धेरै रोइकराई गर्नु नपर्ला ।
किनकी नेपाल गरिब भएको पैसाको अभावले होइन, त्यसको दूरुपयोग हुनाले हो । काम गरेर होइन, भ्रष्टाचार गरेर छोटो समयमै धनी बन्ने प्रवृत्तिले हो । त्यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने कुनै पनि सरकारी काम कारवाही गर्दा कमिसनका कुरा नगर्ने हो भने बजेट यसै पनि छेलोखेलो हुन्छ । महंगी यसै नियन्त्रण हुन्छ ।
त्यसैले आदरणीय अर्थमन्त्रीज्यू
बजेट निर्माणको क्रममा तपाईहरुले प्रयोग गर्ने गरेका ‘सिलिङ’, करका दरहरु, राहतका प्याकेजहरु, विकास र समृद्धिको लागि योजना र कार्यक्रमहरु फगत औपचारिकता मात्रै हो । ‘नियमित आकस्मिकता’ मात्रै हो । जसको फाइदा सारभूत रुपमा केही दर्जन तस्कर, माफिया, कालो बजारिया र पहुंचवाला राजनीतिक दलाल कार्यकर्ताको साथै ‘प्रोजेक्टरका व्यापारीहरु’ले मात्रै लिएका हुन्छन् । आम जनताको लागि त बजेट फगत औपचारिकता र महंगी बढाउने ‘टुल’ मात्रै हो ।
के यसपटक तपाईले ल्याउने बजेट पनि यस्तै हुने हो ?
तपाईलाई नजिकबाट चिन्ने पात्रहरु मध्येको एक भएको नाताले म स्पष्ट छु—इमानमा सम्झौता नगर्ने र अर्थतन्त्रको ‘रौं चिरा’ बुझेको तपाईले पनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन नसके कस्ले देला ? इमान्दार केही अर्थमन्त्रीहरु विगतमा पनि थिए भविश्यमा पनि होलान् तर तिनीहरुको क्षमताले नभ्याउन सक्छ । डिग्री, पिएचडी गरेका, मान सम्मान थुप्रै पाएका र अर्थतन्त्रको ‘रौं चिरा’ बुझेकाहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजान्छन् भन्ने कुराको धेरै उदाहरण देखिएको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको हरेक पक्षलाई बुझेको र इमान्दारितामा खोट नदेखिएको तपाईले पनि सक्नु भएन भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिशा दिन नसके नेपालीले आश गर्ने ठाउं बांकी रहला ? यो प्रश्नको जवाफ सांच्चैकै जटिल छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
त्यसैले तपाईले अब प्रस्तुत गर्ने बजेटमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनै पर्छ । ‘राजनीतिको चक्रव्युह’ले तपाईलाई अर्काे बजेट पेश गर्न दिन्छ, दिंदैन थाहा छैन । त्यसैले पनि यो तपाईको लागि देश बनाउने ‘अन्तिम अवसर’ हो । यसको लागि तपाईले एउटा आंट गर्नुस् अर्थमन्त्रीज्यू, घुस होलिडेको घोषणा गर्नुस् । देशको युगान्तकारी परिवर्तनको नायक बन्नुस । सर्वसाधारणले कहिल्यै प्रवेश नपाउने अर्थमन्त्रालयको भित्तोमो फोटो टांसिइसकेकोमा मात्रै मख्ख पर्न छोडेर हरेक नेपालीको मन मुटूमा वास वस्ने अवसर तपाईलाई छ । त्यसैले यो मौका नगुमाउनुस्, अर्थमन्त्रीज्यू
तपाईको निकै आदर गर्ने शुभचिन्तक